Dowladda oo u digtay dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo u digtay dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab
Ardaan Yare 16 November 2019 16 November 2019
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ee dowladda Federaalka Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in looga baahan yahay dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab inay ku kalsoonaadaan Hay’adaha Garsoorka dalka.
Waxaa uu sheegay in dib u habeyn ay ku wadaan Garsoorka Soomaaliya,isla markaana dadka Shacabka uu uga digay inay Garsoor u doontaan Maxkamadaha Al-Shabaab ilaa inta laga saxayo hay’adaha Garsoorka Soomaaliya.
Saraakiisha Maxkamadaha dalka ayuu dhankooda waxaa uu ugu baaqay in si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan Shacabka,isla markaana ay kasbadaan si kalsooni buuxda loogu qabo u adeegida Bulshadooda.
Marar badan ayay soo baxday Warar sheegayay in dadka Shacabka ah ay garsoor u doontaan Maxkamadaha Al-Shabaab,kadib cadaalad darro ay kala kulmaan Maxkamadaha dalka,hayeeshee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in marnaba aysan aqbaleyn in dadku garsoor u doontaan dhinaca Al-Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horay u sheegay in dowladiisa ay ka Shaqeyn doonto dib u habeynta Garsoorka dalka,iyada oo tababaro badan la siiyey qaar kamid ah Garsoorayaasha Maxkamadaha dalka.
Akhriso:-Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo Guddi Magacaabey
XOG:-Dalal ka aamusay cunaqabateynta hubka ee lagu kordhiyay Somalia